Xaabo Tuugo Matalaysay Kooxdii Jwxo-shiil, oo Shalay Gabal Dhicii ku Kulmay Guri ay Leedahay Jaaliyada Jamaica – Rasaasa News
Aug 10, 2009 Jwxo-shiilada, Jwxo-shiilo
Maahmaah gabdheed Somaliyeed baa waxay tidhaahdaa “doqon rag iyo dib waraab ah midna docdaada laguma waraabiyo” waxaan uga dan lee yahay, dadka qaar baan quusan kolka ay meel bari samaad ku helaan, waxayna moodaan mar kasta oo ay yimaadaan meeshi in ay jirto dharagtii ay waagi ku ogaayeen.
Kooxda Jwxo-shiil, kuwooda ugu garashada xun kol walba waa kuwa abuura dhibaatada ummada, waxayna wax fahmaan kol ay xeedho iyo fandhaal kala dhaceen, oo dadweynaha Somalida Ogadeeniya ay gaadhaan meel ayna ka soo waaqsan karin.
War aan ka helay Waqooyiga London, wuxuu sheegay in shalay qol ku yaal waqooyiga London ay ku kulmeen dad aan la cadaynin ujeedo ay u kulmeen, waxaase la hubaan in ay ku jireen xubno ka tirsanaan jiray kooxda Jwxo-shiil iyo xaaba tuugo aan ujeedadoodu cadayn. Waxaa kulanka ka qayb galay baa la yidhi Cabdulahi Mukhtaar aw Xuseen oo ka yimi dalka Denmark oo xidhay Jakatii Jwxo-shiil, xili aan waxa war ah laga haynin Jwxo-shiil geeri iyo nolol midna, sheekadiisuna tahay xaaladi STALIN, oo kolkuu dhintay la waayey cid ku dhiirata in ay tidhaa STALIN dhimay. Mukhtar waxaa garab fadhiyey Diirane oo ay Ilma Adeer yihiin, oo dadkii hore ula socday isbahaysiyada ururka ONLF ay si cad u dareemayaan in ay u eg tahay shaxdii ay dhigeen xili hore oo ay ku damacsanaayeen in si dhib yari ah oo aan lahayn looltan siyaasadeed iyo is jiidjiid, in uu mar uun noqdo Diirane hogaanka ururka ONLF.
Waa goorma, waa goor rag dhawra lagu haysto gacan ku dhiilenimo, kalana dhaqaaqay ururkii Jwxo, cirkana ay marayso qabyaalada dhex taal beesha Ogadeen oo awal horeba laggaga hadhay halganka. Dilka Doktarka raga baneeyey waan filayaa in ayna fikirin wanaag Ogadeena ayna wadin, waanata maanta keentay in ay beeliba meel maanta ku shirto.
Waxaan qolka sooba galin kooxda Jwxo-shiilo [qabiil ku Jabhad] oo iyaga aan kulankuba kulan u ahayn kolba hadii uuna Jwxo-shiil goobta joogin, marka laga reebo wadaad waalan oo lugta meel walba kula jira. Wax yar oo goobta ka yimi waxay u muuqdeen dad aan faraxsanayn [freaky] oo dirba wax dareensan iyo walbahaar caloosha ah oo ku saabsan xaalada uu ku sugan yahay Jwxo-shiil iyo dunuubta uu Jwxo-shiil u soo jiiday.
Dhanka kale, waxaa qolka kulanka ee Jaliyada Jamaica ka soo xaadiray dad xaabo tuuga ah oo uu ku jiro nin lagu magacaabo Sheekeeye oo asal ahaan reer Hiiraan ah, dhaxsina ku ah dalka Ingriiska. Waxaa kale oo qolka yimi saddex ruux oo la yidhi waxay ka socdaan Jaaliyadaha Iskandenifiyanka, waxaana gacanta isa saarsaaray saddexdooda iyo wiilka ehelkiisu yahay Jaaliyada Jwxo-shiil ee Southal.
Kulanka waxaa kale oo ka soo qayb galay dad beelo gaar ah, oo qabyaalad lagu keenay qolka shirka,balse ayna keenin wax qadyad wadaniyadeed ah, khilaafka beelaha dhexyaal awgiis. Waxaa xudun u ah khilaafka beelaha, khilaaf siyaasadeed oo ururka ONLF, oo in badan ay odayaal beelaha Somalida Ogadeeniya ah, ay isku dayeen in la xaliyo, balse Jwxo-shiil jid laga waayey, ugu dambaystiina uu ku baxay xubin sare oo ONLF ah, markii uu xidh u galay Jwxo-shiil.
Qolka kulanka, ma jirin wax cusub oo lagaga hadlay, balse waxaa uun sidii caadada ahayd lagu sheekaystay hadalo laqwi ah oo aan dhaafsiisnayn qolka gudihiisa oo aan inaba dan u ahayn dadweynaha Somalida Ogadeeniya.
Waxaa u hadlay baal yidhi dhinaca kooxda Jwxo-shiil, Cabdulahi Mukhtar aw Xuseen, oo ayna wajigiisa wax farxad ahi ka muuqan, wuxuuna si taxadar leh hadal kooban ugu bilaabay uguna soo gabo gabeeyey “ha la is cafiyo Eebahayna ha laga cabsado” ma uusan sheegin dambiga la kala galay ee la iska cafiyayo, laakiin waxaa uu hadalka Ina Aw Xuseen u ekaa “qaydhiin cune calooshiisa ayuu ka yuclul qabaa”.
Waxaa kale oo meesha ka jur-jur yidhi xaaba tuugo u badan, heer Xamar iyo heer Kenya ah oo ka kala yimi dalalka Iskandinefiyaniska iyo waliba Rabi Baadiye [Maykal Nin Weyn].
Waxaa goobta fadhiyey baa la yidhi Diirane oo aan isagu bishimaha kala furin, oo isu muujinayey nin loo tabcayo oo qoorta taagaya, waxaase ka nixiyey kooxda Jwxo-shiilo, ka dib kolkii ay soo direen cod telefoon lagu rikoodhiyey oo la sheegay in uu yahay Jwxo-shiil oo gudaha ka soo hadlaya.
Coomaadigu waxaa uu ka tirsan yahay haada, waana nooca ugu wayn noocyada haada, marka laga hadlayo dhinaca qarada, laakiin marka laga eego dhinaca kartida coomaadigu waa nooca ugu tayada xun Haada. Coomaadiga goobaha raqda lagama waayo hilibka ay Haadu cunaysana wuu ka qatan yahay, kolka ugu dambaysa ee uu tukuhu lafaha feenfeenanayo ayaa intuu u soo dhawaado ayuu laf hilibkii laga dhamaystay oo ayna cidina rabin intuu la boodo ayuu waliba la caraar sidii wax wax qaatay.
Waa sida ay maanta tahay xaalada xubnaha Jwxo-shiilada ee goobta ka soo xaadiray, ayaa waxaa lagu qiimayn karaa Coomaadi raq shan maalmood sugayey dharaar lixaadiina laf ingagan la cararaya isaga oo liqi la,a.
Kulankii qolka Jaaliyada Jamaica, Jahwareer soo kordhay iyo Jacdad buu ku dhamaaday